Garoonka » Tartan kubadeeda ku aadan is-dhex galka dhalinyarada koonfur iyo waqooyiga Gaalkacyo oo ka furmay garoonka Cawaale. RSS
You are here:Home International Sports Tartan kubadeeda ku aadan is-dhex galka dhalinyarada koonfur iyo waqooyiga Gaalkacyo oo ka furmay garoonka Cawaale.	0
Tartan kubadeeda ku aadan is-dhex galka dhalinyarada koonfur iyo waqooyiga Gaalkacyo oo ka furmay garoonka Cawaale.
Tartankan oo loogu magac daray koobka dhalinyarada is-dhex galka da’ yarta ee koonfurta iyo waqooyiga Gaalkacyo oo da’doodu tahay 12 jir ilaa 14 jir ayaa galabta si habsami leh oga furmay garoonka Cawaale, waxaana ku tartamayay 8 kooxood.
Ugu horayn waxaa furitaanka ka hadlay qaban-qaabiyaha tartankan C/qani Khaliif (Carabeey) oo ah muwaadinkii lahaa fikirka ay ku kulmayaan dhalin-yarada, C/qani ayaa taageero ka helay ururka Puntland sports ilustred oo masuul uu ka yahay Axmed Nuur Ciise oo ka mida qurba joogta Puntland ee Minneapolis oo ah muwaadinka kaliya ee ballaan qaaday inuu gacan dhaqaale iyo mid fikirba ku yeelan doono tartankan, isagoo dhanka isgaarsiinta kaga qayb galay furitaankii tartankan si uu u baraarujiyo dhalinta ku bara-tamayso wuxuuna u iftiimiyay qiimaha uu leeyahay Sportska ayna tahay mida kaliya ee ka qayb qaadan karta midaynta bulshada.
Gudoomiyaha dhalinyarada & ciyaaraha gobolka Mudug ee dhanka Puntland C/hodan dayax leef oo isaguna garoonka ka hadlay ayaa si weyn ugu mahad celiyay qaban-qaabiyaha tartankan qiimaha leg wuxuuna ku dhiiri galiyay inuu sii ballaariyo dadaalkan caynkan oo kalaa, isagoo dhanka kalana dhalinta ka qayb galaysa ku booriyay inay muujiyaan, wuxuu si gaara fariin taageero oo dhanka dhalinyaradaa u diray ururka Puntland sports ilustred oo gacan ka gaysanaya hir-galinta tartankan.
Tartankan oo maanta lagu furay group A ayaa lagu bilaabay kooxaha New suxufi iyo Ex wada-jir waxaana ciyaartaasi ay ku idlaatay 2–1 oo guusha ay ku raacday kooxda News suxufi, tartankan ayaa la ciyaari doonaa maalmaha Khamiista iyo jimcaha si dhalinta aysan oga mashquulin waxbarashada caadigaa, tartankan ayaa socon doona muddo bil iyo bar ah.